မမသီရိ: March 2014
6 ဂဏန်း ကို ပိုင်စိုးသူများ
(ဒီ ပို့စ် ကို စထား ခဲ့ တာ ၂ နှစ်ကျော်ခဲ့ ပါပြီ. ခုတလော ဘလော့ထဲ အထဲ ၀င် အပြင် ထွက် မွှေ နှောက် ရင်း နဲ့ ဒီ draft ကို တွေ့ တာမို့ ပြီး စီး အောင် ဆက်ရေးပြီး အားလုံး အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်)
ဟိုတလောက မခင်ဦးမေ ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်စကားလေး ပါးတာတွေ့သွားတဲ့ ညီမငယ် ချိုသင်း က
ချိုသင်း: မမရေ မမkom ဆီမှာ ၇ ဂဏန်းသမားတွေအတွက် ပြောထားတာ ဖတ်ရတယ်။ မမနဲ့ မွေးနေ့ မွေးရက်တူတဲ့ ချိုသင်းကိုလဲ ပြောပြပါအုံး။ သိချင်လို့..
ဆိုပြီး ပြောလာ ပါတယ်... အဲဒီညီမလေး နဲ့ ကျမနဲ့ မွေးနေ့ မွေးရက် တူ နေတာမို့ ကျမ သူ့ကို (နှစ်တွေ ကွာနိုင်ပေမဲ့) အမွှာညီအစ်မလို ချစ်ခင်မိတယ် ..။ သူက သိချင်တယ် ပြောလာတော့ ကျမလေ့လာ ဖူးတာလေးတွေ ပြန်ပြောပြဖို့ ဖြစ်လာတာမို့ ဒီမှာပြောပြပေးပါမယ်.. ချစ်ခင်ရတဲ့ အဲဒီ ညီမငယ်လေး အတွက်ရော.. ကျန်တဲ့ ၆ ဂဏန်းဖွားတွေ အတွက်ပါ နှစ်သစ်ကူးလက်ဆောင် ပဲ ဆိုကြပါစို့....။
ခရစ်သက္ကရာဇ်အရ ၆ ရက် ၊ ၁၅ ရက် နဲ့ ၂၄ ရက် နေ့များမှာ မွေးဖွားသူတွေကို - ၆ ဂဏန်း သမားများ အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်၊ မွေးရက် လ နဲ့ မွေးနှစ် အာလုံးပေါင်းလိုက်လို့ ၆ ဂဏန်းသာ ရမယ် ဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ၆ ဂဏန်း စိုးမိုးသူများလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ - ၁၉၇၇ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့ဖွားသူ တစ်ဦး ကို တွက်ကြည့်ရအောင်ပါ။ ၆+၃+၁+၉+၇+၇ = ၃၃ = ၆ ရတဲ့အတွက် သူ့ ကို ၆ ဂဏန်း အပြည့်အ၀ ပိုင်ဆိုင်သူ လို့ ပြောရပါမယ်။ ဂဏန်းဗေဒ သုတေသီ အများစု က ၆ ဂဏန်း သမားတွေ ဟာ ကမ္ဘာပေါ် မှာ ဆန်းကြယ်ထူးဆန်းပြီး အများအားဖြင့် ကံကောင်းသူများလို့ သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ တံခါ တရံမှာ ငွေမက်သူတွေ ဖြစ်နေတတ်ကြပေမဲ့ အချိန်အများစုမှာတော့ အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်သူများ ဖြစ်နေတတ်ကြပါသတဲ့။ သူများပြောတိုင်း မယုံတတ်သလို အရာရာတိုင်းကို အမြဲ ခွဲခြား စိတ်ဖြာ လေ့ ရှိတဲ့ အပြင် အများစုကသေချာစဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အကုန်လုံး အတွက် သေချာတာတစ်ခုက တော့ ၆ ဂဏန်းဖွား ကျားကျား မမ အကုန်လုံး လိုလို ဟာ တစ်ဖက်သား အပေါ် ဆွဲ ဆောင်နိုင်စွမ်း လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုပဲ။
ဒေါက်တာတင်ဗိုလ်ဗိုလ် (ကွန်ပျူဗေဒသုခုမ) ရဲ့ ၆ ဂဏန်းသမားတွေ အကြောင်းရေးထားတာလေး ဒီမှာ ထပ်ပြီး တင်ပြပေးပါမယ် ။
6 ဂဏန်းသည် ညနေဆည်းဆာ နှင့် နံနက်စောစော တို့တွင် ဆည်းဆာကြယ်အဖြစ်၎င်း၊ မိုးသောက်ကြယ် အဖြစ်၎င်း တွေ့မြင်နေရသည့် ''သောကြာဂြိုဟ်'' ပိုင်ဆိုင်သော ဂဏန်းသင်္ချာ ဖြစ်ပြီး ဓာတ်သဘော အရ ''မ ဓာတ်'' ၊ ''ရေ'' ဓာတ် ဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ တဏှာပေမ ၊ အလှပတရား ၊ အနုပညာ ၊ သဘာဝတရား ၊ မိခင်ဆန်ခြင်း၊ လောကစည်းစိမ် နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အာရုံခံစားမှုများ၏ သင်္ကေပင်ဖြစ်လေသည်။ ထို ဝိသေသလက္ခဏာ များကြောင့် (6)ဂဏန်း နေ့ရက် ဖွားများသည် အောက်ပါစရိုက်လက္ခဏာများ ရှိတတ် ကြသည်။
အနုပညာကို ခံစားထိသိလွယ်ကြပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သော စိတ်ထားရှိကြသူများဖြစ်ကြသည်။ အရာရာတွင် နရီစည်းဝါးကျခြင်း (Hermony)၊ နေထားတကျရှိခြင်း (Order)၊ ငြိမ်းချမ်းငြိမ်သက်ခြင်း (Peace) များ ကို နှစ်သက်သောသူများဖြစ်တတ်ကြသည်။ သူတို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တရားမျှတမှု အလွန်တန်ဖိုး ထားသူများဖြစ်ကြပြီး ထို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြရန် လည်း ဝန်မလေးကြသူများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ မိမိနေ အိမ် နှင့် မိသားစုဘဝကို မြတ်နိုးကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး မိမိနေအိမ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သာယာလှပနေစေ လိုကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ လောကကြီးအတွင်း အားနည်းသူများ၊ ဖိနှိပ်ခံရသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေကြသူများဘက်မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လေ့ရှိကြသူများဖြစ်ကြသည်။ ပင်ကိုယ်သဘော အားဖြင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့ ကြသူများ ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ်လာလျှင် ကြမ်းတမ်းပြရန်လည်း ဝန်မလေးကြသူ များဖြစ်လေ့ရှိသည်။ (6)ဂဏန်းသမား အနုပညာဆန်သော တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး မိမိအလုပ် ကိုလည်း သေသပ်ကျနစွာ လုပ်ကိုင်တတ်ကြသူများဖြစ်ကြသည်။
(6)ဂဏန်းပိုင် သောကြာဂြိုဟ်သည် အနုပညာ၊ အလှအပတရား၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လောကကို အလှဆင်ခြင်း တို့ကို ကိုယ်စားပြုသော ဂြိုဟ်ဖြစ်သောကြောင့် (6)ဂဏန်း သမားများသည် စာပေ ဂီတ ပန်းချီ ပန်းပု နှင့် အနုပညာအမျိုးမျိုး၊ ပိသုကာပညာ၊ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းပညာ၊ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းပညာ၊ အမျိုးသမီး အလှပြုပြင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ရင်သွေးထိန်းကျောင်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ သရုပ်ဆောင်မ်ာဒယ်၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာရပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊ ပြုစုစောင့်ရှောက် လုပ်ငန်းများ ဖြင့် အကျိုးပေးတတ်ကြပါသည်။
များသောအားဖြင့်(6)ဂဏန်းဖွားများသည် အချစ်ရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများတွင် သိမ်မွေ့လေး နက်သော ခံစားချက်ရှိသူများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ခံစား ချက် ပြင်းထန်တတ်ကြပြီး နှလုံးသားကို ဦးနှောက်ထက် ဦးစားပေးတတ် ကြသောသူများဖြစ်ကြသည်။ အချစ်စစ် နှင့် မေတ္တာစစ်တို့ကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြပြီး မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဘက်ကိုလည်း အလွန်တန်ဖိုး ထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။
(6)ဂဏန်းသမားများသည်များသောအားဖြင့် ကျန်းမာရေးပုံမှန်အဆင့်လောက်တွင်သာ ရှိနိုင်ပါသည်။ ရေဓာတ် လွှမ်းမိုးမှု အားများခြင်းကြောင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများ၊ ကူးစက်ရောဂါများအား သတိထားရမည်။ နှလုံး၊ လည်ပင်း၊ မျိုးပွားအင်္ဂါဆိုင်ရာရောဂါများ၊ အဖုအကြိတ်ေ ရာဂါများ ၊ ဆီးချိုရောဂါ ၊ လိင်အပျော်ကြူး ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို သတိပြုရမည်။
(6)ဂဏန်းသမားများသည် ဘဝကံကြမ္မာသည် သူတို့နေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အရောင်ပြောင်းနိုင်လေသည်။ သူတို့သည် ''ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် လွတ်လပ် မျှတခြင်း'' များကို အလွန်တန်ဖိုးထားတတ်ကြသဖြင့် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင် ၊ သူတို့နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် တရားမျှတခြင်းများ ရှိပါက သူတို့၏ ဘဝသည်လည်း လိုက်လျော ညီထွေ တိုးတက်ကောင်းမွန်တတ်ကြပြီး ၊ ''ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှင့် တရားမျှတမှု'' မရှိပါက သူတို့သည် အေးချမ်းစွာနေလိုသော သူများအဖြစ်မှ တိုက်ပွဲဝင်သူများ အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ် ကြသည်။ ထိုအခါ သူတို့ဘဝ ကံကြမ္မာတို့မှာ တည်ငြိမ်မှု မရှိတော့ချေ။ထို့ကြောင့် သူတို့သည် မိမိတို့ဘဝ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကို မဆောင်ရွက်နိုင်တော့ဘဲ အများအကျိုး ၊ အများကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့်သာ ဘဝတစ်ခုကို အချိန်ကုန်ကြရသည်လည်း များတတ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် (6)ဂဏန်းသမားများသည် ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာနေသော အချိန်ကာလ များတွင် အနုပညာ အမျိုးမျိုးတို့ကို တီထွင် ဖန်တီးသူများအဖြစ် တွေ့ရတတ်ပြီး ကမ္ဘာကြီး တရားမဲ့ နေသော အချိန်များတွင်မူ တော်လှန်ရေးသမားများ၊ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြသူများ၊ လူအခွင့်အရေး လှုပ်ရှား သူများ အဖြစ်တွေ့ရတတ်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် မိမိဘဝတိုးတက်ကြီးပွားရေးများအတွက် ဂရုမစိုက်နိုင် တော့သောကြောင့် မိသားစုဘဝ ၊ စီးပွားရေးဘဝများ မှာလည်း ပျက်သုန်းရတတ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် (6)ဂဏန်းသမားများသည် ဘဝတည်ငြိမ် အေးချမ်းစေရန် နေရာကောင်း ၊ အရပ်ကောင်းကို မှီခိုတတ်ရန်လိုပေသည်။ အေးချမ်းသာယာ ပတ်ဝန်းကျင် (နိုင်ငံ)များတွင် နေထိုင်ရလျှင် (6)ဂဏန်းသမား သည် အလွန်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သူများဖြစ်လာလေ့ရှိသည်။ (ဥပမာ- Apple ကွန်ပျူတာများ၏ ဖန်ဆင်းရှင် စတိဗ်ဂျော့ဘ် သည် ''ဆီးရီးယား'' လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆီးရီယားနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားနေထိုင်ခဲ့လျှင် ကမ္ဘာကျော် တီထွင်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန် မရှိပေ။ မိဘများက အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် စတိဗ်ဂျော့ဘ် ဟူသော ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေသည်)
# မိတ်ဘက် ရန်ဘက် ဂဏန်းများ
6 ဂဏန်းသည် - 1 ,2,4, 8 ဂဏန်းများနှင့်မူ သင့်မြတ်လှခြင်း မရှိချေ။ သို့သော်3,6,9ဂဏန်း များနှင့်မူ သဟဇာတ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ 5,7 ဂဏန်းများနှင့် အသင့်အတင့် ကောင်းကျိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိနှင့် တည့်သောဂဏန်း မွေးဖွားသူ များနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်း၊ ထိုနံပါတ်များများပါသော အိမ်နံပါတ်၊ ကားနံပါတ် များကို ရွေးချယ်ခြင်း ၊ အရေးကြီးသော ကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ရန် နေ့ရက်များအတွက် မိတ်ဘက် ဂဏန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းကျိုးများ ပိုမိုရရှိ စေနိုင်သည်။
# ကံကောင်း/ကံညံ့ ဖြစ်စေနိုင်သော အသက်ပိုင်းများ
6 ဂဏန်းသမားများသည် (ယေဘူယျအားဖြင့်) မိမိအသက်ကို တစ်လုံးတည်း ပေါင်းခြင်းဖြင့် 1, 2, 4, 8 ဂဏန်းများဖြစ်နေပါက ထိုအသက်ပိုင်းများသည် များသောအားဖြင့် ကံမကောင်း တတ်ချေ။ 3, 6,9ဂဏန်းကျသော နှစ်များတွင်မူ ကံကောင်းမှု ထူးခြားမှုများ ကြုံရတတ်ပါသည်။
(သို့သော်အထက်ပါအသက်ပိုင်းများသည်''ပုံသေ''နည်းမဟုတ်ပါ။ အကြမ်းဖျဉ်းမျှသာဖစ်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် မှန်ကန်တတ်သောကြောင့်သတိပြုနိုင်စေ ရန် ဖြစ်ပါသည်)။ မြန်မာ့ မဟာဘုတ် နည်းစံနစ်ဖြင့် ''ကောင်းသော သက္ခတ် ၊ ဆိုးသော သက္ခတ် ၊ ဘုမ္မိကြီး ၊ ဘုမ္မိလေး ကျခြင်း ၊ သက်ရောက် နှင့် ဂြိုဟ်စား ပက္ခတ် မိခြင်း/ မမိခြင်း စသော အချက်များဖြင့် တိုက်ဆိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်)
#6ဂဏန်းသမား ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်အချို့
Mr.Bean အမည်ဖြင့် ကမ္ဘာကျော်သူ ဟာသသရုပ်ဆောင် ရိုဝင်အာကင်ဆန်
ပန်းချီ ၊ ပန်းပု ၊ ပိသုကာ နှင့် သိပ္ပံပညာ စွယ်စုံပညာရှင် မိုက်ကယ်အိန်ဂျလို
ဟောလီဝုဒ် မင်းသားကြီးဘဝမှ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာသူ ရော်နယ်ရီဂင်
ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ အကြီးအကဲဟောင်း ယူရီအင်ဒရိုပေါ့ဗ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံသူ အာဇာနည်သူရဲကောင်းလေး ဂျူန်းအော့အာ့ခ်
ဘောလုံးသမား အကျော်အမော် ရော်ဘင်ဗန်ပါစီ
ဟောလီဝုဒ် အက်ရှင်မင်းသားကြီး ဆီဗက်စတာစတားလုံး
ခေတ်သစ် စိတ်သရုပ်ခွဲ ပညာရှင် - ဒေါက်တာဆစ်ဂမန်ဖရွိုက်
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး ဆာဝေါ်လတာစကော့
ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း - တိုနီဘလဲယား
အမေရိကန် သမ္မတ တစ်ဦးဖြစ်သူ – ဂျော့ခ်ျ ဘုရှ် (စီနီယာ)
15 ရက်ဖွား ကမ္ဘာကျော်များ
မိုနာလီဇာ'' ပန်းချီကား ဖန်တီးရှင် ပန်းချီဆရာကြီး လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ
ယူရေးနပ်စ်ဂြိုဟ်ကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့သူ နက္ခတ်ပညာရှင် ဝီလီယံဟာရှဲလ်
''ဂေါ့ဖားသား'' ဝတ္တုဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သူ စာရေးဆရာကြီး မာရီယိုပူဇို
အမေရိကန် လူမည်းများ၏ အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ မာတင်လူသာကင်း
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဂျာမဏီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အာဝင်ရွန်းမဲလ်
Laurance of Arabia ဟု ကျော်ကြားခဲ့သူ စစ်ဘုရင် T.E လောရင့်စ်
နက္ခတ်တာရာကြည့် မှန်ပြောင်းကို တီထွင်ခဲ့သူ နက္ခတ်ပညာရှင် ဂလီလီယို
24 ရက်ဖွား ကမ္ဘာကျော်များ
အမေရိကန် တီထွင်သူ ၊ လူထူးဆန်း သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး ဟောင်းဝပ်ဟူး
Apple ကွန်ပျူတာများ၏ ဖန်ဆင်းရှင် မှော်ဆရာကြီး စတိဗ်ဂျော့ဘ်
နာမည်ကျော် အဆိုကျော် နှင့် သရုပ်ဆောင် ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်
အီရန် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အယာတိုလာခိုမေနီ
ကမ္ဘာကျော် ''တက်ကျမ်း'' စာရေးဆရာကြီး ဒေးလ်ကာနက်ဂျီ
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာကြီး အလက်ဇန်းဒါးဒူးမား
ပါလက်စတိုင်း လွတ်မြောက်ရေးခေါင်းဆောင် ယာဆာအာရာဖတ်
အောက်မှ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ကမ္ဘာကျော်၊ နာမည်ကျော် တွေ ကတော့ စိုးမိုးဂဏန်း ၆ ရသူတွေပါ
Eleanor Roosevelt October 11, 1884
Federico Fellini January 20, 1920
ကဲ ဒီလောက် ဆို- ၆ ဂဏန်းသမားတွေ အကြောင်း တီးမိ ခေါက်မိ ရှိလောက်ကြပြ ထင်ပါရဲ့၊ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ထဲ အတွက် အကြမ်းဖျဉ်း ခန့်မှန်း ဟောကိန်းလေး တွေ တွက်ပေး ပါမယ်။
၆ ဂဏန်း သမား အများစု အတွက် ၂၀၁၄ ဟာ အလွန် ကံကောင်းလှ တဲ့ နှစ် တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး၊ အများစု အတွက် ရန် နှစ် လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ငွေ ကုန်ကြေးကျ နဲနဲများမယ်၊ ကျန်းမာရေး ချူခြာမယ်၊ လုပ်ငန်း အကြံအစည်တွေ ထင်သလောက် မပေါက် မြောက်နိုင်သေး။ ကိုယ် မလုပ်ချင်တာတွေ ပဲ ဆက်တိုက် လုပ်နေရပြီးတော့ လက်အောက်ငယ်သားတွေ ကြောင့် စိတ်အနှာင့် အယှက်များမဲ့ နှစ်ပါ။ အထက် လူကြီး တွေ ရဲ့ သဘောကျ မြှောက်စားတာ ခံ ရပေမဲ့ မနာ လိုသူတွေ များ ပါမယ် တဲ့။
၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီလ နဲ့ အောက်တိုဘာ လတွေ ထဲ မှာ လူကြီး မိဘ တွေ ရဲ့ ကျန်းမာရေး အလေးပေး ရပါမယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ နဲ့ နိုဝင်ဘာ လတွေ ဟာ စန်း အပွင့်ဆုံး လတွေ ဖြစ်ပြီး ချစ်သူရီးစား ရတတ်တယ်၊ လက်ထပ် ခြင်း ကိစ္စ ကြုံတတ်တယ်၊ ရာထူတိုးခြင်း လုပ်ငန်း အဆင်ပြေခြင်းတွေ ရှိပါမယ်၊
မတ်လ နဲ့ ဒီဇင်ဘာ လတွေ မှာတော့ နိုင်ငံခြား ခရီး ဒါမှ မဟုတ် ပြည်တွင်း ခရီးရှည်တွေ ပေါ်လာတတ် တယ်၊
ဧပြီလ ထဲမှာ အိုး အိမ်၊ အိမ် ခန်း အသစ် ၀ယ်ရ တတ်မျိုး၊ ပြုပြင်ရတတ်မျိုး၊ စက်ပစ္စည်း ယာဉ် ကား စတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ၀င်တတ်ပါတယ်၊ ထီ ၀ါသနာပါသူတွေ အတွက် ထီ ပေါက် ကိန်း ကြုံတတ်ပြီး မိဘ ဆွေ မျိုး များ ဆီက အမွေ တွေ လဲ ရတတ် ပါတယ်။
မေ လ ထဲ မှာ တော့ ရေလမ်း ခရီး သွား ရမယ် ဆို သတိ ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး အပူလောင် ခြင်း အပူ ရှပ် နဲ့ ပူပင် စရာ ကိစ္စလေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဆီပူ၊ ရေနွေးပူ လောင်တတ်တာမျိုးတွေ ရှိနိုင်ပြီး ထိခိုက် မှုတွေ လဲ သတိပြုရပါမယ်။
ဇွန်လ ကတော့ လုပ်ငန်း သစ် လုပ်ရတတ်ခြင်း၊ ဘ၀ သစ် စ ရတတ်ခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုး ရှိ တဲ့ အစပျိုးခြင်း ရှိတယ်ပါမယ်။
ဇူလိုင်လ နဲ့ သြဂုတ်လတွေဟာကံကောင်းတဲ့လတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ သင်တန်းအခွင့် အလမ်းတွေ ပေါ်တတ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုခြင်း၊ အလုပ်သစ် ပြောင်းရခြင်း၊ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ခရီးတို၊ ခရီးရှည်တွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
စက်တင်ဘာ လထဲ မှာတော့ ငွေက အလုံးအရင်း ၀င်လိုက် အလုံးအရင်း ထွက်လိုက် ဖြစ်နေ ပေမဲ့ ကျန် ကိစ္စ တွေ ကတော့ ကံကောင်း နေပါမယ် တဲ့။
၁၈ မတ် ၂၀၁၄
Posted by မမသီရိ at 3/18/2014 02:41:00 PM
ဖြူလျော်အားလျှော့ ဖျော့တော့သောမျက်ဝန်းများ ..
ပိုးကောင်တွေ စီစီ ညံ ဟိုပျံ ဒီလွှား မရပ်မနား
တစ်ခြမ်းသာ ပ နိုင်တော့တဲ့ ဆုတ် သော လ
သူပေးသမျှ အလင်းရောင်မှာ နာကျင်မှုတွေ နဲ့ နက်မှောင်လို့
ဖျောက်ဆိပ်ကြယ်တွေ ခိုးခိုး တောက်ပ အဲဒီ ညမှာ
စီရင်ချက်ကျခဲ့ပြီ လို့ ထင်နေတဲ့ ကဗျာဆရာဟာ
သူ့ချစ်ခြင်း နဲ့ အကောင်းအတိုင်းဖြစ်လိုခြင်းသာ သိ
ကွဲ အက် ပဲ့တင်သံ တွေ .. ဝေးဝေးက အမြန်လမ်းပေါ် ပြေးလွှား ..
ကဗျာဆရာဟာ.. သူ့ ရင် ကို ဆွဲ ဖွင့် ..
စူးစူးနင့်နင့် ဟစ်ကြွေး.. (သူ့မိဖုရားအတွက်) သူ ရေးသီ ဖူးသော ကဗျာများ..
လ မင်း.. လိုက် ငို...
ကြယ်စင်တွေ ငို .
ညဉ့်နက်နက် ထဲ ညဉ့်ငှက်တွေ ငို..
နံရံပေါ် က ပန်းချီကား လဲ ငို..
အညို နုနု ခန်းဆီးတွေ ငို..
တောင်တန်းနိမ့်နိမ့် လေးတွေ ငို..
ရောင်စုံ စက္ကူပန်းတွေ ငို..
လေနုအေးအေး လေး လဲ ငို..
ကဗျာဆရာ ရဲ့ မိဖုရား ဟာ...
မျက် လွှာ အသာ ပွင့်... ကဗျာဆရာ့ ချစ်ခြင်း ဖြင့်.
အသစ် ရှင်သန်ထမြောက် လာ..
ကဗျာဆရာ့ နှုတ်ခမ်း အပေါ် မှာ
အနမ်း ပွင့်တွေ ကြွေကျ
ကုန်စင်အောင် သွန်မှောက် ချ လိုက်တော့တယ်... ။
(ကဗျာဆရာ နဲ့ သူ့ရဲ့ မိဖုရား - ၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၄ အတွက်)
Posted by မမသီရိ at 3/06/2014 12:06:00 AM